कुमारी बैंकले सार्वजनिक गर्यो नयाँ ब्याजदर, कुन खातामा कति दिर्दैछ ब्याज ? - नेपालबहस
कुमारी बैंकले सार्वजनिक गर्यो नयाँ ब्याजदर, कुन खातामा कति दिर्दैछ ब्याज ?
| १४:२९:३५ मा प्रकाशित
२७ फागुन, काठमाडौं । कुमारी बैंकले नयाँ ब्याजदर सार्वजनिक गरेको छ । बैंकले चैत १ गतेदेखि लागूहुने गरी नयाँ ब्याजदर सार्वजनिक गरेको हो । बैंकले सार्वजनिक गरेको उक्त विवरणका अनुसार बचतको ब्याज दर यथावत राखेको छ । बैंकले साधारण निक्षेप अर्थात बचतमा न्यूनतम २ देखि ४ प्रतिशत ब्याज दिइरहेको छ ।
त्यस्तै बैंकले मुद्दती निक्षेपको ब्याजदर वृद्धि गरेको छ। चैत १ गतेदेखि लागू हुने गरी बैंकले मुद्दतीको ब्याजदर बढाएको हो। बैंकले तीन महिनादेखि एक वर्षसम्म अवधिको मुद्दती निक्षेपको ब्याजदर बढाएको छ । अहिले बैंकले मुद्दती निक्षेपमा ६ प्रतिशत ब्याज दिइरहेकोमा छ ।
सोही ब्याजदरलाई आधा प्रतिशत बिन्दुले बढाएको हो। ६ प्रतिशतको ब्याजलाई बैंकले साढे ६ प्रतिशत पुर्‍याएको हो। यो व्यक्तिगत मुद्दतीकर्तालाई दिने ब्याज हो। संस्थागत निक्षेपकर्ताको ब्याज भने राम्रै बढाएको छ। यसअघि ३ महिनादेखि ६ महिनासम्मको ब्याज ४.७५ प्रतिशत, ६ महिनादेखि एक वर्षसम्म ५.२५ प्रतिशत, पाँच वर्षसम्मकोमा ६.७५ प्रतिशतसम्म ब्याज थियो।
अब बैंकले तीन महिनाभन्दा माथिका सम्पूर्ण संस्थागत मुद्दती निक्षेपको ब्याज ७ प्रतिशत पुर्‍याएको छ। त्यस्तै, कर्जाको ब्याजदर भने परिर्वतन गरिएको छैन् ।
आईपीएलः आज मुम्बई र दिल्ली भिड्दै, कुन टिमले मार्ला बाजी १८ घण्टा पहिले
संक्रमित फेला परेसंगै इलाममा सतर्कता अपनाउन आग्रह १० घण्टा पहिले
म्याग्दीमा कोरोनाकै कारण केही सकारात्मक परिवर्तन ५ दिन पहिले
सकियो प्रतिनिधिसभा सातौँ अधिवेशन,दर्ता भएन नयाँ विधेयक १ दिन पहिले
ब्राजिलमा कोरोनाबाट एकै दिन १ हजार भन्दा बढिको मृत्यु २ दिन पहिले
बागलुङका ३० सामुदायिक वनमा आगलागी ५ दिन पहिले
राष्ट्रपतिसमक्ष राजदूतले प्रस्तुत गरे ओहोदाको प्रमाणपत्र ४ दिन पहिले
त्रिकोणात्मक सिरिजका लागि नेपाली टोलीको घोषणा ६ दिन पहिले
ओली सरकारको बहिर्गमन र लोकतन्त्रको संरक्षण ५ दिन पहिले
चिनियाँ विदेशमन्त्री युएई भ्रमणमा, कोभिड खोपको नयाँ प्लान्ट शिलान्यास ३ हप्ता पहिले
नामिबियालाई कोभाक्सबाट खोप उपलब्ध ४ दिन पहिले
डढेलोले लाङ्टाङ निकुञ्जको २५ हेक्टर जङ्गल नोक्सान ४ दिन पहिले
इजिप्ट र जोर्डनका विदेशमन्त्री इराकमा ३ हप्ता पहिले
विमानस्थल निर्माणका लागि रुख नकाट्न अन्तरिम आदेश १ वर्ष पहिले
भारतमा अझै दुई हप्ता लकडाउन थप्ने तयारी १२ महिना पहिले
लगातार वर्षा र असिनाले गहुँबालीमा क्षति, भोकमरीको चिन्ता ११ महिना पहिले
राहत प्याकेज ल्याउन देउवाको आग्रह १ वर्ष पहिले